सञ्चिताले स्विकारिन्, कोपिलाले नकारिन् | नेपालको सम्झना
Browse » Home » फिल्मी खबर » सञ्चिताले स्विकारिन्, कोपिलाले नकारिन्
- अभिनेत्री सञ्चिता लुइँटेलले अभिनेता निखिल उप्रेतीसँग बिहे गरेको स्वीकार गरेकी छिन्। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट बुधबार प्रसारण भएको कार्यक्रम 'रजतपट' मार्फत् उनले सो कुरा स्विकारेकी हुन्। 'तीन वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई दुई वर्षअघि विवाहमा परिणत गरेका हौं। परिवारको सहमतिमा निखिलजीको घरमा बिहे भएको हो,' सञ्चिताले भनिन्, 'मसँग धन सम्पत्ति केही छैन। जोगीजस्तै हुँ। तैपनि तिमी बिहेका लागि तयार छौ त? भनेर निखिलले सोधे। मैले सहमति जनाएँ।'निखिलले मिडियामा नल्यानु भनेकाले अहिलेसम्म यो सम्बन्ध गोप्य राखेको उनले बताइन्। काठमाडौंमा घर नभएकोले निखिल दुई वर्षदेखि होटल र दिदीको घरमा बस्दै आएको समेत सञ्चिताले बताएकी छिन्।
अन्तर्वार्तामा उनले छिट्टै निखिललाई नेपाल फर्काउने र फिल्ममा उनको 'ग्याप' मेटाउने दावी समेत गरिन्।
पहिला निखिल र आफ्नो 'केमेस्ट्री' मिलेको चर्चा गर्ने मिडियाले बिहेको खबरलाई नकारात्मक रूपले प्रस्तुत गरेकोमा असन्तुष्टि समेत पोखिन् उनले। बिहेपछिको एउटा दशैं निखिलको घरमा मनाएको उनले खुलाइन्।
निखिलले काठमाडौंबाहिर सुटिङ परेको समय बाहेक एक दिन पनि घर छाडेका छैनन्। यो कुरा सबै छिमेकीलाई थाहा छ। दुई वर्षदेखि निखिल घरमा नभएको भए आठ महिनाको छोरो कसरी आयो?' कोपिलाले प्रश्न गरिन्, 'एउटा फिल्मबाट २० हजार पाउने हिरोइनले निखिललाई मुम्बई राखेर पालेको गफ एकदमै फाल्तु छ।'
0 comments to “सञ्चिताले स्विकारिन्, कोपिलाले नकारिन्”